Fetin’ny noely sy ny faran’ny taona Ankizy an’arivony no nozaraina kilalao sy ranom-boankazo
Ankizy an’arivony no nozaraina kilalao sy ranom-boankazo teto an-drenivohitra nanomboka ny 20 ka hatramin’ny 26 desambra lasa teo noho ny fahatongavan’ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Lohalaharana amin’izany ireo ankizy kilasy mandry miisa 154 raisina an-tanana eo anivon’ny Akany Avoko.
Toraka izany koa ireo ankizy 200 isa mpireniteny sy sahirana ara-pivelomana eo anivon’ny Fokontany Besarety ahian’ny fikambanana ShareMada mivantana ankoatra ireo ankizy 720 isa beazina eo anivon’ny sekoly “Etoile rouge” tantanan-dry masera. Ny orinasa Star no nanolotra ireo fanomezana ireo. Tsy diso anjara tamin’izany ireo fianakaviana sahirana ao anatin’ny kaominina Tsiafajavona amin’izao ankatoky ny faran’ny taona izao. Kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro maro isan-karazany 260 fonosana no natolotra azy ireo tamin’izany niampy ranom-boankazo 1.100 tavoahangy sy kilalao 200 isa. Nambaran-dRazafindrakoto Karine, mpandrindra ny serasera eo anivon’ny orinasa Star nandritra izany moa fa ny mba hahafahan’izy ireo mampiaina fifaliana ireo niangaran’ny vintana eto amintsika amin’izao fankalazana ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona izao no tena tanjon’izy ireo, indrindra fa ireo ankizy madinika tsy manan-tsiny.